ကိုယ့်မင်္ဂလာဆောင်လို သက်ဝင်ခံစား စီမံပေးတတ်တဲ့ Wedding Planner Aye Thidar Win Aung
မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ့် လူနှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတချို့ကို ဝေမျှယူလိုက်သူ
Wedding Planner ဆိုတာ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီး ဖြစ်ချင်တဲ့ မင်္ဂလာပွဲပုံစံကို သူတို့ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ငွေပမာဏအရ
သတို့သားနဲ့ သတို့သမီး လိုချင်၊ ဖြစ်ချင်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို တစ်ခုမှ
ကျန်မနေစေရအောင် ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်စွမ်းလည်း သူ့မှာ ရှိရပါတယ်။
စီမံတယ်ဆိုတာက Photographer, Videographer, Makeup Artist, Designer,
Beautician, Florist, Band, DJ, MC စတဲ့ Partner တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး အသေးစိတ် သေချာအောင်
ကြိုလုပ်ရတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါ့အပြင် ပွဲတက်ရောက်လာမယ့် လူအရေအတွက်ပေါ် မူတည်ပြီး
အဆင်ပြေမယ့် ဟိုတယ်ကိုလည်း သူပဲ ရွေးချယ်ရပါတယ်။
ပွဲအခမ်းအနားပုံစံ ရွေးချယ်မှု၊ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းမယ့်နေရာတွေ စီစဉ်ထားရှိမှု၊ အခြေအနေ
အမျိုးမျိုးကို ကိုင်တွယ်ပြောဆိုတတ်တဲ့ MC ကို ရွေးချယ်တတ်မှု စတာတွေဟာလည်း
Wedding Planner တစ်ယောက်မှာ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့သော ဘာသာ၊ လူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံတွေအရ မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုမှာ ဘာတွေက လုပ်သင့်ပြီး ဘာတွေက ရှောင်ကြည်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်း လေ့လာသိရှိထားဖို့ လိုပါသေးတယ်။
မျှော်လင့်မထားတဲ့အခြေအနေတွေ ကြုံလာခဲ့ရင် မင်္ဂလာပွဲကို မထိခိုက်အောင် Back-up Plan တွေလည်း သူပဲ ကြိုတင်စီစဉ်ထားရတာပါ။
ဆိုရရင် မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ့် လူနှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတချို့ကို ဝေမျှယူလိုက်သူဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ဖေဖော်ဝါရီလဟာ မင်္ဂလာပွဲတွေ အများဆုံး ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ လတစ်လဖြစ်တဲ့အပြင် တချို့ဆို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ဗလန်တိုင်းနေ့မှာမှ တကူးတက ရွေးချယ်ကာ မင်္ဂလာဆောင်လေ့ ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ဒီလရဲ့ MODA WOMAN ကို Signature Wedding & Event Planning ရဲ့ Founder လည်း ဖြစ်၊ Wedding Planner တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တဲ့ မအေးသီတာဝင်းအောင်ကို ရွေးချယ်ကာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
MODA. ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေက အစ်မကို Wedding Planner တစ်ယောက် ဖြစ်စေခဲ့တာလဲ။
ATDWA. ငယ်ငယ်ကတည်းကပဲ စပြောရမယ် ထင်တယ်။ ငယ်ငယ်ကပဲ မင်္ဂလာဆောင်တွေ သွားရတာကို သဘောကျတယ်။ သတို့သမီးတွေ သတို့သားတွေ ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားတွေ၊ လက်ဝတ်ရတနာတွေကအစ သေသေချာချာ ကြည့်နေတတ်တယ်။ အရွယ်ရောက်လို့ အလုပ် စလုပ်ဖြစ်ရင် Wedding Planner တစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ဖို့ စဉ်းစားမိခဲ့တယ်။ Jennifer Lopez သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ The Wedding Planner ရုပ်ရှင်ကို ကြိုက်ခဲ့တာလည်း ပါတာပေါ့။
MODA. ကျောင်းတက်ခဲ့တာက ဒီအလုပ်ကို အထောက်အကူ ပြုတယ်လို့ ထင်သလား။
ATDWA. ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ်နဲ့ ဒီအလုပ်က သိပ်မဆိုင်ပေမယ့် လုပ်ရင်းနဲ့ သင်၊ သင်ရင်းနဲ့ လုပ် တတ်သွားတာပါပဲ။ တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ် မတူဘဲ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ Fashion Trend တွေကိုတော့ အမြဲလိုလို စောင့်ကြည့်ခဲ့ရတာပေါ့။ အတွေ့အကြုံတွေကနေပဲ အများကြီး သင်ယူခဲ့ရတယ်။ အများကြီး စိတ်ရှည်ခဲ့ရတယ်။ စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတာတွေလည်း အများကြီး ရှိတယ်။
MODA. ဒါဆိုရင် ဒီအလုပ်ကို ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်တွေ ရှိခဲ့သလား။
ATDWA. ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ Career က ဝါသနာလည်း ဖြစ်နေတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အားတင်းခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ခါတလေကျရင်လည်း ကိုယ် လုပ်လိုက်လို့ သတို့သမီးအတွက်က စိတ်ညစ်စရာတစ်ခု ဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စိတ်ထိခိုက်မိတယ်။ နောက်နေ့ကျရင် ဒီအလုပ်ကို ဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရက်နည်းနည်း ကြာသွားတဲ့အခါကျ နောက်တစ်ပွဲဆိုရင် ပိုကောင်းအောင် ငါ လုပ်နိုင်တာပဲလို့ တွေးမိတယ်။ ဒီလို စိတ်ဖြေခဲ့ရင်းနဲ့ပဲ ပိုကြိုးစားဖြစ်ခဲ့တယ်။
MODA. အသေအချာ ကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့ပါလျက်နဲ့ကို ဘယ်လိုအမှားတွေ ကြုံခဲ့ဖူးသေးလဲ။
ATDWA. အလုပ်လုပ်ရင်တော့ အမှား မရှိဘူးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ပြောပါဆို ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်ရင်ကို အစ်မ စိတ်ကျေနပ်မှုရတယ်။
MODA. Wedding Planner တစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိလာအောင် ဘယ်လိုလေ့လာဖြည့်တင်းခဲ့လဲ။ အတွေ့အကြုံတွေကို ဝေမျှပေးပါဦး။
ATDWA. အဓိကကတော့ အတွေ့အကြုံတွေပါပဲ။ အစ်မတို့မှာ Wedding ပွဲတွေ စီစဉ်တဲ့အခါ လွယ်ကူအဆင်ပြေဖို့ To Do Lists ထားပေးတယ်။ Wedding Planner တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကတော့ မင်္ဂလာပွဲတွေကို အောင်မြင်အောင် စီစဉ်ပေးရတာပဲ။ အဓိကကတော့ ယုံကြည်မှုနဲ့ အချိန်ပေးနိုင်ဖို့ပါ။ အစ်မကို ယုံကြည်ပြီး မင်္ဂလာပွဲ စီစဉ်ဖို့ လာအပ်တဲ့ Couple တွေနဲ့ Family တွေကိုလည်း သူတို့ စိတ်မပျက်အောင် အသေးစိတ် အစီအစဉ်တွေ ဆွဲပြီး Wedding Industries တစ်ခုလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရတာပေါ့။
MODA. ပွဲတွေ အများကြီး စီစဉ်တတ်လျက်သားနဲ့ Event တွေ အစုံ စီစဉ်တဲ့ Planner မလုပ်ဘဲ Wedding Planner အဖြစ် တစ်လိုင်းတည်းကို ဘာလို့ ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
ATDWA. အစ်မ အရှေ့မှာ ဖြေခဲ့သလိုပါပဲ။ Decoration လှလှလေးတွေနဲ့ သတို့သမီးလှလှလေးတွေ မြင်ရင် စိတ်ချမ်းသာတယ်။ သတို့သား သတို့သမီးတွေနဲ့ စကားပြောရတာကိုကျ ကြိုက်တယ်။ အဓိကက သတို့သား သတို့သမီးတွေရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို မျှယူပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။
Event တချို့ကိုတော့ အစ်မ စီစဉ်ပေးဖူးတယ်။ အစ်မတို့ကို ယုံကြည်ပြီး ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ လက်တွဲဖြစ်တယ်။ လာအပ်ရင် အစ်မ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကို ပြောပြတယ်။ စိတ်တိုင်းကျရင် အစ်မနဲ့ လုပ်ပေါ့။
MODA. Signature Wedding & Event Planning လို့ နာမည်ပေးဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ စဖွင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခုနှစ်ကို သိပါရစေ။
ATDWA. မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါ Signing လုပ်ရတာမို့ Signature Wedding & Event Planning လို့ နာမည်ပေးဖြစ်ခဲ့တာ။ စဖွင့်ခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၂၊ နိုဝင်ဘာလမှာပါ။
MODA. အတူတူ လက်တွဲလုပ်ရတဲ့ အဓိက Partner တွေက . . . ။
ATDWA. အဓိက Partner တွေက Photographer, Makeup Artist, Designer, MC, DJ, Band, Installation လုပ်တဲ့လူတွေ၊ Lighting နဲ့ Sound System ကို ကိုင်တဲ့လူတွေပေါ့။ ပြီးရင် အဆင်ပြေမယ့် ဟိုတယ်ကို ရွေးချိတ်ရတယ်။
MODA. အလုပ်အများဆုံးလတွေက . . .
ATDWA. နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ။
MODA. ၂၀၁၂ ကနေ ၂၀၁၉ အထိ မင်္ဂလာပွဲပေါင်း ဘယ်နှပွဲအထိ စီစဉ်ပေးခဲ့ဖူးပြီလဲ။
ATDWA. တစ်နှစ်မှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ပွဲပေါင်း ၂၀ လောက် စီစဉ်ပေးရတယ်။ အခုဆို ပွဲ ၁၀၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။
MODA. စီစဉ်ရတာတွေထဲမှာ စိတ်ချမ်းသာရတဲ့အပိုင်းက ဘယ်အပိုင်းများလဲ။
ATDWA. Decoration ပိုင်းမှာ ပန်းတွေ လိုက်ထိုးပေးရတဲ့အခါ စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ဝတ်စုံ စီစဉ်တဲ့အခါ အကြံပေးရတာကိုလည်း ကြိုက်တယ်။
MODA. စိန်ခေါ်မှုအမြင့်ဆုံးအပိုင်းဆိုရင်ကော . . . ။
ATDWA. အခုလက်ရှိမှာတော့ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ ညှိနှိုင်းပြောဆိုရတာတွေကလည်း လုပ်တာကြာလာတော့ ကောင်းကောင်း လုပ်တတ်သွားပြီ။ မာမီကျော် ပြောဖူးတာ ရှိတယ်။ " Client ကို မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မပြောနဲ့။ ဒီလိုကတော့ အဖြစ်နိုင်ဆုံး လုပ်လို့ရတယ်လို့သာ ပြောပါ " တဲ့။ တချို့ Client တွေက စိတ်ဆတ်တယ်။ ကိုယ့်ဆီ ရောက်လာပေမယ့် ကိုယ့်ကို မယုံကြည်တာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါကို ယုံကြည်လာအောင် ကိုယ့်အပြောအဆိုနဲ့ လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။
ဦးလေးက သင်ပြဖူးတာလည်း ရှိတယ်။ " အောင်မြင်ဖို့က လွယ်တယ်။ အောင်မြင်တာကို ဆက်ထိန်းထားဖို့ကပဲ ခက်တာ " တဲ့။ အဲဒါကြောင့် အစ်မလည်း ကြိုးစားသထက် ပိုပိုပြီး ကြိုးစားနေပါတယ်။
MODA. ကိုယ် စီစဉ်ထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ရင်ဆိုပြီး Back-up Plan တွေ လုပ်ထားတတ်သလား။
ATDWA. လုပ်ထားတတ်တယ်။ အဲဒါကို သင်ပေးတဲ့လူလည်း ရှိလို့လေ။ တကယ်လို့ Plan A ဆိုတာက ထင်သလို မဖြစ်ခဲ့ရင် အဆင်ပြေအောင် Plan B ကို လုပ်ကိုလုပ်ထားရတယ်။ MC ကို တစ်ယောက်ပဲ စီစဉ်ပြီးကာမှ သူက ဖျက်လိုက်လို့ နောက်တစ်ယောက်ကို ချက်ချင်းတော့ မရနိုင်ဘူးပေါ့။ ဒါမျိုးကျ သေချာအောင် Booking ကြိုချိတ်ပြီးကို လုပ်ထားရတာ။
MODA. တစ်နေ့တည်း တစ်ချိန်တည်းမှာ ပွဲနှစ်ပွဲ သုံးပွဲ စီစဉ်ဖူးတာမျိုး ရှိခဲ့လား။
ATDWA. တစ်နေ့တည်းမှာ နှစ်ပွဲဆိုရင် First Customer ရဲ့ပွဲကို ဦးစားပေးပြီး သွားတယ်။ Second Customer ဆီကိုကျ ရုံးက တခြားလူတွေ သွားတာပေါ့။ တစ်နေ့တည်းပေမယ့် အချိန် မတူရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အဲဒါမျိုးက သုံးပွဲအထိတောင် စီစဉ်ဖူးတယ်။ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်မှာဆို မနက် ၁၀ နာရီကနေ ၁၂ နာရီအထိက တစ်ပွဲ၊ နေ့လယ် ၁ နာရီကနေ ၃ နာရီအထိက တစ်ပွဲနဲ့ ညနေ ၆ နာရီကနေ ည ၉ နာရီအထိက တစ်ပွဲ။ သုံးပွဲ ဆက်တိုက် ပြီးရင်တော့ နောက်နေ့ကျ အစ်မ တစ်နေကုန် နားပြီလေ။
MODA. LGBT တွေ လက်ထပ်တဲ့မင်္ဂလာပွဲမျိုးကော စီစဉ်ပေးခဲ့ဖူးလား။
ATDWA. စီစဉ်ဖူးတယ်။ နာမည်တော့ မပြောတော့ပါဘူး။ အစ်မနဲ့ ခင်နေတာကြောင့် စီစဉ်ပေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သူတို့ မွေးနေ့ ကျင်းပပေးနေရင်းနဲ့ လက်စွပ်ကို Surprise အဖြစ်လုပ်တာကိုလည်း အစ်မပဲ စီစဉ်ပေးဖြစ်ခဲ့တာ။
MODA. မှတ်မှတ်ရရအဖြစ်ဆုံး မင်္ဂလာပွဲဆိုရင်ကော ဘယ်ပွဲကို ရွေးပြောချင်သလဲ။
ATDWA. ရွေးပြောရမှာ ခက်လိုက်တာ။ ဒါပေမဲ့ ပျော်လည်း ပျော်ရ၊ စိတ်ဖိစီးမှုလည်း အများကြီးရ၊ အောင်မြင်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုလည်း ရတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲ ရှိတယ်။ ပွဲတက်လာတဲ့လူတွေကလည်း အရမ်း သဘောကျတယ်လို့ ထုတ်ပြောကြတယ်။ Inya Lake မှာ ကျင်းပတဲ့ Naw Naw နဲ့ Pan Pan တို့ မင်္ဂလာပွဲပေါ့။ သူတို့က အစ်မ အဆင်ပြေသလို အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးပါတဲ့။
အဲဒီတုန်းက Dancing Floor ပတ်ပတ်လည်မှာ ပန်းတိုင်ကြီးတွေ ရှိတယ်။ အစ်မက တိုင်တွေမှာ မီးပန်းတွေကို ပြောင်းပြန်တွေ ချထားလိုက်တယ်။ Firework ဆိုတာ အောက်ကမှ အပေါ်ကို တက်တာလေ။ အဲဒါကို ပြောင်းပြန်လုပ်ပစ်လိုက်တာ။ အရင်က Event တချို့မှာ ဒါမျိုး လုပ်ခဲ့ဖူးပေမယ့် မင်္ဂလာပွဲမှာကျ ဒါက ပထမဆုံးအကြိမ် လုပ်ဖူးတာ။ ပွဲတက်လာသူတွေက အရမ်း Surprise ဖြစ်ကြတယ်။
MODA. လေးစားအားကျရတဲ့ Wedding Planner တွေကိုလည်း ပြောပြပါဦး။
ATDWA. ရုရှားက Wedding Planner တစ်ယောက်ကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ Kseniaa Fan Asyeva တဲ့။ သူက သူ စီစဉ်တဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ အသားပေးထားတဲ့အရောင်ကို မူတည်ပြီး သူကိုယ်တိုင် သူ့ဝတ်စုံကိုပါ ပြင်ဆင်ဝတ်တတ်တာလေ။
MODA. အစ်မကိုယ်တိုင်ကော ပွဲတစ်ပွဲကို တက်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေကို ဦးစားပေးပြင်ဆင်တတ်သလဲ။
ATDWA. အဝတ်အစားနဲ့ လက်ဝတ်ရတနာကိုပဲ ဦးစားပေးစီစဉ်တတ်တယ်။ လိမ်းခြယ်တာတွေကိုတော့ အစ်မကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်ဖြစ်တယ်။ သိပ်လည်း ထွေထွေထူးထူး မလိမ်းခြယ်တတ်သူဆိုတော့လေ။
MODA. စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များပြီး စိတ်ဓာတ်ကျတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်သလား။
ATDWA. အစ်မ စီစဉ်တဲ့ Decoration Design တွေ လွဲမှားမှုမရှိအောင် ဂရုစိုက်ရတယ်။ ပွဲတစ်ပွဲကို တစ်ပတ်လောက် စီစဉ်ရတာဆိုတော့ စိတ်ထဲ အလုပ်အကြောင်းကို အများကြီး တွေးမနေမိတဲ့နေ့ရယ်လို့တောင် မရှိပါဘူး။
MODA. အစ်မ ဘယ်နှခုနှစ်မှာ အိမ်ထောင်ကျခဲ့တာလဲ။ မင်္ဂလာပွဲကိုကော တခြားစီစဉ်သူဆီ အပ်ခဲ့တာလား၊ ကိုယ်တိုင်ပဲ စီစဉ်တာလား။
ATDWA. ၂၀၁၆ မှာ အစ်မ လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ မင်္ဂလာပွဲကို တစ်လတည်းနဲ့ ကိုယ်တိုင် စီစဉ်ခဲ့တာ။ Partner တွေ အကုန်လုံးကလည်း ကူညီကြတယ်လေ။
MODA. Wedding Planner ဖြစ်ချင်သူတွေအတွက် အကြံပြုစကားလေး ပြောပေးပါဦး။
ATDWA. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အတော်ဆုံးလို့ သတ်မှတ်မထားပါနဲ့။ ကိုယ်သာလျှင် အတော်ဆုံး၊ ကိုယ်သာလျှင် အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်လိုက်ရင် တကယ်ပြည့်ဝတဲ့လူ ဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူး။ အများ ဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့စကားတွေကို နားထောင်ပြီး ပြင်ဆင်ကြိုးစားတတ်သူဖြစ်အောင်လည်း လုပ်စေချင်တယ်။